आशा नै नगरिएको लगानी लोक पप गित “पानीले खोज्यो भिरालो” बजारमा आउने तयारिमा कति हो त लगानी…..???? – Enepal Khabar
कस्ले मुल्यांकन गर्न सक्छ साधारण लोक गितमा पनि लाखौंको लगानी हुन सक्छ? लोकगित संगीतको बजारमा पहिलो पटक उत्कृष्ट लगानीमा भिडियो निर्माण हुदैछ। करिब करिब पाँच लाख भन्दा बढी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त गीतको बोल रहेको छ (पानीले भिरालो खोज्यो) बहुप्रतिभाका धनी चर्चित गायक तथा क्षमतावान संगीतकार बसन्त थापाको शब्द,संगित र आवाजमा आउन लागेको गितको गायिका हुन आम दर्शक श्रोता माझ अत्याधिक रुचाईएकि सुमधुर आवाजकि धनी सीता श्रेष्ठ। भिडियो सर्बजनिक नहुदै चर्चापरिचर्चा गरिएको गितका निर्माता हुन,लामो समय देखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहनु भएका प्रस्तुतकर्ता तथा अन्लाईन पत्रीका (eनेपालखबर) का सस्थापक राजन क्षेत्री र अशोक सुवेदी। संयुक्त साझेदारीको लगानी भएको भिडियोमा लोक दोहोरी क्षेत्रमै प्रथम पटक चलचित्रमा प्रयोग गरिने एरि क्यामारा प्रयोग गरिएको छ।
लोक गितकै ईतिहासमा महँगो मानिएको सोही भिडियोको अभिनय पक्षमा पनि उत्तिकै बलियोपन झल्किएको छ। मोडल दुर्गेश थापा र नायिका मरिस्का पोख्रेल संगै मोडल ओबी रायमाझीको दमादार अभिनय देख्न पाईने उक्त भिडियोको निर्देशन भने प्रथम खड्का क्षेत्रीले गरेका छन्।
मङ्सिर १ गते शनिबार देखि सार्बजनिक गर्न लागिएको गितले दर्जकको मन जित्न सफल होला वा नहोला त्यो भने हेर्न बाकिनै छ। उत्कृष्ट लगानी अनुसारको सफलता मिल्नेमा (पानीले भिरालो खोज्यो) का निर्माण समूह भने बिस्वस्त छन्।
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०३:२८ मा प्रकाशित